Amoolee: Itoophiyaatti tajaajilli kanfaltii dijitaalaa haaraan eegale - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Amole
Dhaabbatni Moneta Teknoolojiis Baankii Daashin waliin ta'uun sirna daldala dijitaalaa mobaayilaan deeggaramu maqaa 'Amoolee moobaayil waaleet' jedhu itti moggaasuun kaleessa ifatti eebbiseera.
Keeniyaatti Hundeessaan tajaajila daddabarsa maallaqaa M-PESA jedhamuu fi biyyatti keessatti walitti daldala namootaa salphisee, obbo Mikaa'el Jooseef sagantaa eebbaa kaleessa Hoteela Sharaatan irratti affeeramanii turan.
Sirni daddabarsa maallaqaa digitaalawaa Amoolee kun dhaabbilee biroo waliin hojjetu akka manneen daldalaa, baankiilee fi dhaabbilee tajaajila kennan biroo filachuun waliin hojjeta.
Pirezidantii itti aanaan Monet teknoolojiis obbo Saamsoon Geetuu, dhaabbatichi maamiltootaaf ''bakka jiranii appilikeeshinii Amoolee kanaan fayyadamanii waan fedhan bitanii akka kaffalan, maallaqa nama dhuunfaatti fi dhabbata tajaajila kennuuf akka dabarsan carraa kennaaf'' jedhu.
Tajaajilli Amoolee 'mPOS' daddabarsa maallaqaaf, hariiroo miidiyaa hawaasummaafi maallaqa nama dhuunfaaf dabarsuuf'meedaa', kaffaltii tajaajila teelekoomiif 'Hidasie Telecom', tajaajila bittaa meeshaalef 'zMall' tajaajila bittaa kitaabota onlaayiniif 'Loomii', taaksii waammatanii kaffaltii raawwachuuf ETTA fi kanneen biroos qaba.
Tajaajilli dijitaala akka kanaa Itoophiyaa keessatti waggoota muraasa as dhaabbilee akka mbirr fi Hello cash hojiirra oolaa kan jiran yoo ta'u, Amoolee kan adda godhu 'dhaabbilee daldalaa fi tajaajilaa kennan waliin hojjechuu isaanii' akka ta'e obbo Saamsoon himaniiru.
Kaardii mobaayilaa dabalatee bittaafi gurgurtaa, kaffaltii tajaajiloota akka ibsaa, teeleefi bishaanii dijitaalessuun jiruuf jireenya uummataa salphisuun yaada ka'umsaa kaampaanii isaanii akka ta'es obbo Saamsoon himaniiru.
Hanga hawaasa waliin wal baranitti tajaajila Amooleebaankiing Waalet irraa argataniif dhaabbatichi maamiltootarraa kaffaltiin gaafatu hin jirus jedhaniiru.
Yeroo muraasa booda tajaajilli tolaan kennan kun xumuramee Baankii Daashin waliin ta'uun bu'aa isaan tajaajiloota kennan irra argatan akka murtaa'us dabalanii ibsaniiru.
Viidiyoo Seenaa maaltu abdii daldala bilisaa Afriikaa duuba jira?